အမြဲပြုံးနေပေမယ့် လူမသိတဲ့ နောက်ကွယ်က ကြုံတွေ့နေရတဲ့ ဘဝအခြေအနေကို မျှဝေခဲ့တဲ့ ကြူကြူသင်း – Suehninsi
ပရိသတ်အသိမှတ်ပြုအားပေးခြင်းကို ဟာသဇာတ်ပို့ဇာတ်ရံတစ်ယောက်အနေနဲ့ ရရှိထားသူ ကြူကြူသင်းကတော့ ဒီနေ့မှာ သူ့ဘဝရဲ့နောက်ကွယ်က အကြောင်းတချို့ကို မျှဝေခဲ့ပါတယ်။ သူကတော့ ရုပ်ရှင်လောကမှာ နှစ်သုံးဆယ်ကျော်ကြာ လုပ်လာသူဖြစ်ပေမယ့် အခုချိန်ထိ အိမ်ပိုင်တောင်မရှိသေးသူပါ။ သူ့ရဲ့မိဘတွေကိုယ်တိုင်ကိုက မောင်နှမသားချင်းတွေနဲ့အတူ အိမ်တစ်လုံးထဲမှာ စုပြီးနေထိုင်တာကြိုက်ကြတာမို့ အဲ့ဒီအချိန်ကတည်းက ကိုယ်ပိုင်အိမ်ဝယ်ဖို့
မစဉ်းစားခဲ့ကြသူတွေပါတဲ့ ။ တကယ်တန်း မိဘတွေဆုံးပါးပြီး အမွေဆိုင်အိမ်ကြီးကနေ သူ့မိဘတွေရဲ့ဝေစုကို ရခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့ အိမ်ဝယ်ဖို့တောင် မမှီတော့တဲ့ငွေနဲ့ အိမ်ငှားဘဝရောက်တော့တာပါပဲတဲ့ ပရိသတ်ကြီးရေ… အများအမြင်မှာတော့ ရုပ်ရှင်တွေရိုက်ရတာထောနေမှာပဲလို့ ထင်နေပေမယ့် သူတစ်ယောက်တည်းရပ်တည်ရတဲ့ ဘဝမှာ အိမ်လခ၊မီးဖိုး၊ရေဖိုး သောက်ရေကအစ ဝယ်သောက်နေရတဲ့ခေတ်မှာ
မပြေလည်တဲ့သူ့အခြေအနေကို လူမသိအောင် ရပ်တည်ခဲ့ရပါတယ်တဲ့။ ကားရိုက်တွေမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာလည်း ဘဝရပ်တည်ဖို့အတွက် ကော်ရည်ခေါက်ဆွဲရောင်းခဲ့ပေမယ့် ဒီကပ်ဆိုးကြီးကြောင့် အလုပ်တွေရပ်ရပြန်ပါပြီတဲ့ ပရိသတ်ကြီးရေ… အခုလိုချိန်မှာ ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးနဲ့ အလှူရှင်တွေက လှူပေးနေတဲ့အရာတွေနဲ့ စားသောက်နေရပေမယ့် အလှူလက်ခံလိုက်တိုင်း တိုက်ခန်းနဲ့နေပြီး
ပေးသမျှယူတယ် ထောက်ပံ့တာတွေစားတယ်ဆိုတဲ့အတွေး တွေးတဲ့သူတွေကြောင့် သူ့ဘဝအခြေအနေကို မျှဝေခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ပရိသတ်ကြီးရေ…. တိုက်ခန်းနဲ့နေတိုင်းလည်း ဝင်ငွေမရှိရင်ဘာနဲ့ သွားစားမလဲနော်။ တီကြူကတော့ သူ့ကိုလှူပေးတဲ့သူတိုင်း ကျန်းမာချမ်းသာစေဖို့ မေတ္တာပို့ပေးနေတဲ့အပြင် သူကိုယ်တိုင်လည်း တနေ့နေ့မှာ ပေးကမ်းစွန့်ကြဲနိုင်သူဖြစ်ရပါလို၏ လို့လည်း ဆုတောင်းနေပါတယ်တဲ့။
ပရိသတျအသိမှတျပွုအားပေးခွငျးကို ဟာသဇာတျပို့ဇာတျရံတဈယောကျအနနေဲ့ ရရှိထားသူ ကွူကွူသငျးကတော့ ဒီနမှေ့ာ သူ့ဘဝရဲ့နောကျကှယျက အကွောငျးတခြို့ကို မြှဝခေဲ့ပါတယျ။ သူကတော့ ရုပျရှငျလောကမှာ နှဈသုံးဆယျကြျောကွာ လုပျလာသူဖွဈပမေယျ့ အခုခြိနျထိ အိမျပိုငျတောငျမရှိသေးသူပါ။ သူ့ရဲ့မိဘတှကေိုယျတိုငျကိုက မောငျနှမသားခငျြးတှနေဲ့အတူ အိမျတဈလုံးထဲမှာ စုပွီးနထေိုငျတာကွိုကျကွတာမို့ အဲ့ဒီအခြိနျကတညျးက ကိုယျပိုငျအိမျဝယျဖို့
မစဉျးစားခဲ့ကွသူတှပေါတဲ့ ။ တကယျတနျး မိဘတှဆေုံးပါးပွီး အမှဆေိုငျအိမျကွီးကနေ သူ့မိဘတှရေဲ့ဝစေုကို ရခဲ့တဲ့အခြိနျမှာတော့ အိမျဝယျဖို့တောငျ မမှီတော့တဲ့ငှနေဲ့ အိမျငှားဘဝရောကျတော့တာပါပဲတဲ့ ပရိသတျကွီးရေ… အမြားအမွငျမှာတော့ ရုပျရှငျတှရေိုကျရတာထောနမှောပဲလို့ ထငျနပေမေယျ့ သူတဈယောကျတညျးရပျတညျရတဲ့ ဘဝမှာ အိမျလခ၊မီးဖိုး၊ရဖေိုး သောကျရကေအစ ဝယျသောကျနရေတဲ့ခတျေမှာ
မပွလေညျတဲ့သူ့အခွအေနကေို လူမသိအောငျ ရပျတညျခဲ့ရပါတယျတဲ့။ ကားရိုကျတှမေရှိတော့တဲ့အခြိနျမှာလညျး ဘဝရပျတညျဖို့အတှကျ ကျောရညျခေါကျဆှဲရောငျးခဲ့ပမေယျ့ ဒီကပျဆိုးကွီးကွောငျ့ အလုပျတှရေပျရပွနျပါပွီတဲ့ ပရိသတျကွီးရေ… အခုလိုခြိနျမှာ ရုပျရှငျအစညျးအရုံးနဲ့ အလှူရှငျတှကေ လှူပေးနတေဲ့အရာတှနေဲ့ စားသောကျနရေပမေယျ့ အလှူလကျခံလိုကျတိုငျး တိုကျခနျးနဲ့နပွေီး
ပေးသမြှယူတယျ ထောကျပံ့တာတှစေားတယျဆိုတဲ့အတှေး တှေးတဲ့သူတှကွေောငျ့ သူ့ဘဝအခွအေနကေို မြှဝခေဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ ပရိသတျကွီးရေ…. တိုကျခနျးနဲ့နတေိုငျးလညျး ဝငျငှမေရှိရငျဘာနဲ့ သှားစားမလဲနျော။ တီကွူကတော့ သူ့ကိုလှူပေးတဲ့သူတိုငျး ကနျြးမာခမျြးသာစဖေို့ မတ်ေတာပို့ပေးနတေဲ့အပွငျ သူကိုယျတိုငျလညျး တနနေ့မှေ့ာ ပေးကမျးစှနျ့ကွဲနိုငျသူဖွဈရပါလို၏ လို့လညျး ဆုတောငျးနပေါတယျတဲ့။
Source : Kyu Kyu Thin’s Facebook | Reference & Credit : Cele Gabar
ယနေ့အသက်(၂၃)နှစ်ပြည့်သွားပြီဖြစ်တဲ့ အဆိုတော်ကြီး ထူးအိမ်သင်ရဲ့ သမီးလေး မိကွန်ထော